“Ciyaartii Waa Ay Waalatay!”- Jurgen Klopp & Cesc Fabregas
By Balaleti	 On Oct 17, 2020
Cesc Fabregas ayay amakaak ku noqotay in goolkii guusha ee waqtigii dhimashada uu dhaliyay Jordan Henderson loo diiday inuu offside jiray.
Kabtanka Liverpool ayaa moodayay inuu kooxdiisa ku hogaamiyay guul 3-2 ah ka dib baas uu ka helay Sadio Mane daqiiqadii labaad ee shan daqiiqo oo ciyaarta lagu daray.
Laakiin farxadii Jordan Henderson ayaa murugo isku bedeshay ka dib markii VAR ay waqti dheer oo ay dib u eegis sameyneysay go’aamisay in Sadio Mane uu offside ahaa markii uu kubada ka helayay Thiago Alcantara.
Marka la daawanayo ciyaarta, xiddiga reer Senegal wuxuu u muuqdaa mid la siman daafacyada Everton ee Yerry Mina iyo Michael Keane laakiin xariiqaha ay sawireen VAR ayay ku go’aamiyeen inuu offside ahaa.
Isagoo ka jawaab celinayay go’aankaan, Fabregas ayaa baraha bulshada kaga hadlay sida uu uga careysan yahay go’aanka isagoo soo qoray: “Sidee ayay taasi offside ku tahay? Ciyaartii waa ay waalatay”.
Tababaraha Liverpool ayaa isna jawaab la mid ah ka bixiyay go;aanka isagoo BT Sport kala hadlay ciyaarta ka dib go’aankii kooxdiisa looga diiday guusha.
“Waan arkay goolkii Henderson. Ma arkin wax offside ah waana ka xumahay” ayuu yiri Klopp.
“Malaha qof ayaa ii sharxi doona laakiin sawirka aan aragnay ma aheyn offside. Laakiin offside ayay aheyd sababtoo ah qof ayaa go’aansaday inay tahay.”
Inkastoo Liverpool lagu qasbay inay dhibic ku sabarto ka dib go’aankaas VAR, Klopp ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay qaab ciyaareedka kooxdiisa.
Tababaraha Reds ayaa yiri: “Qaab ciyaareedka wuxuu ahaa mid sareeya. Waad arki kartay in labada kooxood ay ciyaar wanaagsan soo bandhigeen.
“Anaga ayaa sida cad heysanay ciyaarta inagoo weliba la ciyaareyna koox kalsooni badan heysata oo qorshe cad leh.
“Xaqiiqdii waxaan ciyaarnay kulan fiican, malaha waxay aheyd kulankii ugu fiicnaa ee Goodison Park tan iyo intii aan joogay Liverpool laakiin waxay ku dhamaatay barbaro 2-2 ah sababo kale darteed.
“Waxaad ku fekereysaa inaan kaliya faraxsanaan lahaa haddii aan badin laheyn, waan sii faraxsanaan lahaa haddii aan badin laheyn laakiin jawaabta aan bixinay iyo qaab ciyaareedkeena ugu yaraan wuu fiicnaa”
Balaleti 135 posts
historic Memorandum of Understanding with General Electric